Vivaldi 4.0 inotora tsamba dzayo, karenda uye RSS vatengi kunze kwekuyedza | Linux Vakapindwa muropa
Vivaldi 4.0 inotora tsamba dzayo, khalendari uye RSS vatengi kunze kwekuyedza uye inogadziridza injini yayo kuChromium 91.0.4472.79
Last november takadzokorora yechimwe chinhu icho Vivaldi Technologies yaive ichigadzirira browser rako. Mune vangangokwikwidzana navo, ini handizive imwe inozviita, kana tichida kutarisa tsamba dzedu kana kuona kuti ndeapi mabasa atinawo kumberi atinofanira kupinda webhusaiti webasa kana kushandisa mutengi saThunderbird. Izvo hazvichazodiwi kubva Vivaldi 4.0 , que ivo vaparura mangwanani ano.
Muchokwadi, idzi sarudzo dzakabatsira Ndichachinja kuva Vivaldi seye default browser izvozvi zvave kupfuura mwedzi. Kunze kwe karenda uye tsambaChero ani anoda kunyorera kuRSS feeds anogonawo kuzviita kubva kune chishandiso chitsva, asi kana ini pachangu ndisingashandise imhaka yekuti inosanganisa tsamba nenhau, zvinoita sekunge pane chinhu chekuverenga uye hachiwirirane pakati pemidziyo , saka ndagara naInoreader padivi repaneru.
Vivaldi 4.0 inosimbisa
Chishandiso chekushandura chemuno, chinofambiswa neLingvanex
Mutengi wemeyili (nematabhu), karenda uye RSS zvinowedzerwa padivi panhivi. Kana iyo RSS sarudzo ikagoneswa, icon nyowani inowoneka mu URL bar yekukurumidza kunyorera. Mutsamba yekuburitswa ivo vanotsanangura maitiro ekuti iite kuti isaratidze mune tsamba, saka ndichaipa mumwe mukana.
Chitsva chekugamuchira skrini kubva kwatinosarudza huwandu hwemabasa akakosha atinoda kushandisa, pakati peakakosha, echinyakare uye akazara sarudzo. Zvingave sei zvimwe, kana chimwe chinhu chisina kuvhurwa kubva pakutanga, chinogona kumisikidzwa gare gare.
Tsigiro yeAzerbaijani neKurdish.
Injini yakavandudzwa kuChromium 91.0.4472.79.
Yakagadziriswa mabegi mazhinji, ese anowanikwa mu chinja runyorwa.
Vivaldi 4.0 yakatangwa zviri pamutemo mangwanani ano, saka vashandisi veWindows uye macOS vanogona ikozvino kugadzirisa kubva kune imwechete browser kana kurodha vhezheni itsva kubva peji yepamutemo. Pakati pevashandisi veLinux, Ubuntu yatovepo kubva kunzvimbo yekuchengetedza, nepo mamwe masisitimu anoshanda achasvika mumazuva anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vivaldi 4.0 inotora tsamba dzayo, khalendari uye RSS vatengi kunze kwekuyedza uye inogadziridza injini yayo kuChromium 91.0.4472.79
Kwemwedzi ndanga ndichishandisa vivaldi pachinzvimbo chechromium muManjaro uye chokwadi ndechekuti ndinoda chaizvo kusanganisa bhurawuza netsamba zvakanyanya, nekuti ikozvino ndawana anotevera mapoinzi asina kunaka:
1- Vivaldi foramu isina kuzara, nekuti paunopa mazano mamoderator (avo vanotenda kuti ndevamwari) vanokutumira kumamirioni 1 tambo nemusoro mumwe chete kuti ugone kuvhota mune ese (mazhinji acho mune mimwe mitauro yakadai seRussia, Chinese, nezvimwewo), panzvimbo pekugadzira tambo panowanikwa zvikumbiro zvakajairika uye vashandisi vanogona kungovhota zvakanaka kana zvisina kunaka.
2-muPost Office saizi ikholamu hairatidze chero kukosha.
3- Pachivande zvinongokutendera kuti ubvise nhoroondo yekutsvagisa paunovhara bhurawuza, uchisiya nhoroondo yekurodha yamatebhu achangovharwa pasina kudzima (kuve nenhoroondo iyi kunobatsira pawakavhara windows mashoma asi inova inonetesa kana uine risingaperi rondedzero windows), autocomplete, nezvimwe, izvo zvinofanirwa kudzimwa nemawoko (zvese mu opera uye kumucheto zvinokutendera iwe kusarudza kudzima otomatiki kana uchivhara browser). Handizive kana ivo vasingade kuzviita kana kana ivo vasingazive kuzviita, nekuti muforamu (mavanotadza kukupa bhora) kune zvikumbiro zvinoverengeka zvekuishandisa.
4- Ini handizive kana ichishanda mune dzimwe shanduro (mac nemahwindo), asi mune manjaro sarudzo F11 (yakazara skrini) haina chainoita.
5- kuona pdf paunosarudza kuvhura, kurodha pasi zvakananga muodha dhairekitori, pachinzvimbo chekuisa mune dhairekodhi dhairekitori iro rinobviswa.
6- zvese zviri zviviri "zvemo» muturikiri uye kuwedzeredzwa kwegoogle hazvishande kana musoro wepeji rewebhu (nemamwe ese mururimi rwekutanga) rwakatakurwa nemutauro mumwechete weOS yaunoshandisa (mu chromium yaibvumidza iwe kushandura nekudzvanya nebhatani rekurudyi, uchiratidza sarudzo dudziro), zvakare zvaizodikanwa kuti uone kana mushanduro yechina vakagadzirisa kuti muturikiri wechivanhu arambe achishanda pamapeji ane mupumburu usingaperi (nekuti inongodudzira chikamu chekutanga wozomira kushanda. )
Kunyangwe izvi zviripo ikozvino ndicharamba ndichizvishandisa nekuti zvinoshanda mushe
Iwe watove pachikwata changu;)
Zvimwe zvinhu: zvaunotaura pamusangano, chimwe chinhu chandataura uye hongu, ichokwadi, asi zvakajairika nekuda kwehuwandu hwevanhu uye zvinoitika munzvimbo zhinji / maforamu / nharaunda. Ini ndinokurudzira iwe kuti upinde muTeregiramu boka (semuenzaniso), uko zvese zviri padyo, asi muChirungu. Kana mitauro iri dambudziko, muTeregiramu iwe une google kana yandex dudziro bot uye inogona kukubatsira.
Chinhu cheF11, wakamboedza iyo Fn kiyi? Inoshanda kwandiri.
Kune vamwe vese, zvakanaka, ivo vanofanirwa kukwenya zvinhu kumusoro, asi zvinopa zvakawanda uye iri "diki" browser. Kushivirira.
Collabora akavandudza mutyairi weWayland weWine uye zvino inowirirana neVulkan